सफारी गाइड अभिलेखहरू - TipWho
दक्षिण अफ्रिकामा टिपिंग: सफारी संस्करण दक्षिण अफ्रिकामा सफारीमा? के तपाईको गाइड र ट्र्याकरले तपाईले देख्नु भएको सबै भेट्टाउनु भएको छ? के उनीहरूले राम्रो सेवा प्रदान गरे? के तपाईलाई थाहा छ दक्षिण अफ्रिकाको सफारीमा कत्ति सल्लाह दिईन्छ? के मलाई टिप्स चाहिन्छ? दक्षिण अफ्रीकामा, सफारी / खेलमा स्टाफको टिप्स गर्ने चलन छ […]